Lacagaha maalgashiga ugu hal abuurka badan suuqa | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Lacagaha maalgashiga ugu casrisan suuqa
Mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee aad leedahay markii aad iska diiwaangelineyso lacagaha maal-gashiga waa noocyo badan oo kala duwan oo aad ka kala dooran karto, nooc kasta oo ay tahay. Ficil ahaan qayb kasta oo dhaqaale, xitaa hanti badan abwaanada, iyo mararka qaarkood xitaa wax aan caadi ahayn. Dhaqdhaqaaqyo ganacsi oo yar ayaa ka baxsan waxyaabahaas maaliyadeed. Maaha wax aan micno lahayn, maareeyayaashu waxay si joogto ah u bilaabayeen qaabab cusub, oo ay isku dayaan inay ka yaabiyaan macaamiisha si ay u diiwaangeliyaan. In ka badan hal munaasabadoodna way guuleystaan, iyadoon loo eegin astaanta ay soo bandhigayaan.
Muuqaalkan, dhibaatada weyn ee ku haysata waa mid kale oo aan ka ahayn inaad doorato nooca moodooyinka aad dooranayso, iyo taas oo ku abuuri karta dib u soo celin aad u badan kaydkaaga. Gaar ahaan kuwa laga soo dheegtay meheradaha ganacsi ee cusub, ama meelaha ganacsiga ee aan weli si fiican ugu dhisnayn nidaamka maaliyadeed. Si kastaba ha noqotee, iyada oo loo marayo lacagaha maalgashiga waxaad ku gaari kartaa hanti kasta oo maaliyadeed si fudud oo dhakhso leh. Maaddaama aad ka kireysan karto bangigaaga caadiga ah, xitaa qaab khadka tooska ah, si loo dedejiyo hannaanka iibsashada saamiyadaada.
Si loo isku dayo in loo soo jiito dareenka macaamiishooda, maareeyayaasha alaabooyinkan ka waaban maayaan inay suuqyada keenaan lacag asal ah oo sii kordheysa, taas oo illaa dhowr sano ka hor aadan qiyaasi karin in laguu adeegsan karo inaad ku maal gasho keydkooda. Xitaa gaarsiinta ka faa'iideyso xaaladaha isbeddellada ee suuqyada sinnaanta. Taasna marka la eego fursadaha yar ee aad ku heli karto dib ugu soo noqoshada kaydintaada, waxay sidoo kale u oggolaanayaan dulsaarka dulsaarku inuu ku koro xaaladdan maaddaama xasillooni darrada ka jirta suuqyada maaliyaddu ay aad u daran tahay.
1 Lacagta ku saleysan badeecada
2 Tiknoolajiyada cusub ee beddelka u ah maalgashiga
3 Maalgashiyada cagaaran ee loogu talagalay astaamaha deegaanka
4 Maalgashiga wadamada soo koraya
5 Maalgashiga macdanta
6 Sidee loogu shaqeeyaa lacagahaas?
Lacagta ku saleysan badeecada
Waxaad haysataa habab yar oo aad ku maal gashato hantidan maaliyadeed adoo adeegsanaya moodooyinka caadiga ah. Laakiin haddii aad doorato lacag leh astaamahan, waxaad heli doontaa wax ka badan aqbalid la aqbali karo, taas oo ah waxay kuxirantahay maadooyin kaladuwan oo kaladuwan, ficil ahaan aan xad lahayn. Laga soo bilaabo cuntooyinka ugu waaweyn (soy, sonkor, cudbi, sarreen ...), ilaa arrimaha kale ee la xiriira tamarta (gaaska, shidaalka, sifeynta, iwm). Ikhtiyaarrada furan waa kuwo aad u ballaaran, oo aadan ka mari karin alaabada kale ee maaliyadeed, xitaa kuwa heer sare leh.
Waa mid ka mid ah wax soo saarka ku xiran meertooyinka dhaqaalaha, lagana heli karo faa iido aad u fiican, haddii horumarkeedu yahay midka kuugu habboon danahaaga. Laga bilaabo waqtigan, waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad doorato kuwa ugu habboon munaasabad kasta. Taasina waa si sax ah dhibaatada ugu weyn ee shaqaaleynta lacagahaas gaarka ah.
Astaamo kale oo iyaga ka mid ah ayaa ah inay ku wajahan yihiin maal-gashadayaal aqoon ballaaran u leh suuqyadan, oo yaqaana sida loo fahmo dhaqdhaqaaqooda. Haddii aad buuxiso shuruudahan, waxaad heli doontaa fursado ganacsi oo dhab ah bilaha soo socda. In kasta oo iyaga looga dhigo kuwo faa'iido leh waa inaad nafsaddaada u bandhigto muddooyinka dheer. Iyo in xitaa waxaad ka kireysan kartaa lacagaha maalgashiga ee lagu kaydiyo hantida kale ee maaliyadeed, labadaba dakhliga go'an, sida doorsoomaha.
Tiknoolajiyada cusub ee beddelka u ah maalgashiga
Shaki la'aan, qaybtan ganacsiga ee sii kordheysa waa mid ka mid ah kuwa ugu hal-abuurka badan ee soo muuqday sannadihii la soo dhaafay, oo leh moodooyinka ganacsi ee ugu horumarsan. Iyo inay leeyihiin dhul barwaaqo ah oo lagu kasbado raasumaalka marka loo eego xaaladaha ugu caansan ee suuqyada sinnaanta. In kasta oo, taa lidkeeda, halista aad gasho ay ka sarreeyaan marka loo eego maaliyadaha kale ee dhaqameed.
Maalgashiga, kiiskan, wuxuu diiradda saarayaa kaliya shirkadaha ku xiran internetka, laakiin sidoo kale dhammaan qeybaha tikniyoolajiyadda, ku dhowaad iyada oo aan laga reebin (bixiyeyaasha adeegga, ganacsiga elektarooniga ah, softiweerka, qalabka, xiriirka Wi-Fi, iwm.). In kastoo in badan oo ka mid ah bixinta lacagahaani waxay ka yimaadaan shirkadaha yaryar, oo waxtarkooda ugu weyni kujiro himilooyinka kobaca wanaagsan ee ay kusoo bandhigaan suuqyada saamiyada. Ma aha wax aan caadi ahayn in aad la kulanto soo jeedin, taas oo ka badan xaqiiqooyinka, waxa ay bixiyaan waa rajooyinka mustaqbalka.
Maalgashiyada cagaaran ee loogu talagalay astaamaha deegaanka
Ikhtiyaar kale oo maalgashi oo buuxiya shuruudahan waa dabeecad cagaaran, oo ay weheliso qayb ka mid ah bey'adda deegaanka oo ka kooban guud ahaan halabuurrada maal-gashiga. Iyada oo leh soo jeedin ballaaran, nooc kasta, iyo dhammaan astaamaha ay soo bandhigeen maalgashadayaasha tafaariiqda. Laga bilaabo yareynta isbeddelada saameynta cimilada, ilaa keydinta keydinta tikniyoolajiyadaha nadiifka ah. Halkee sanadihii la soo dhaafay, waxaa ka soo ifbaxay maalgelin maalgashi oo ku saleysan koritaanka waara ee meeraha.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee xulashada qaabkan maalgashiga gaarka ah ayaa ah marka laga reebo raadinta dib u soo celinta keydka, dadka haysta alaabtaan waxay awoodi doonaan inay horumariyaan howlahooda iyadoo la raacayo shuruudaha ay aaminsan yihiin, haya taxane ah qiyam, kaliya maahan noloshiisa gaarka ah, laakiin sidoo kale u wareejinta dhinaca maaliyadda. Waxay maalgashi ku saleeyaan jagooyinkooda shaqsiyadeed.
Sidaa darteed, la yaab ma leh in shirkadaha maamulku ay dalabkan macaamiisha ka qaataan, oo ay u janjeeraan inay soo saaraan alaabooyin la kulma astaamahan, iyagoo si aad iyo aad u badan u bixinaya, naqshado run ah oo hal abuur leh, iyo xaalado badan oo xitaa ku cusub nooca ay ka kooban yihiin. . Iyo kuwa waxaad ku guuleysan kartaa soo noqosho sanadle ah oo caadi ahaan udhaxeysa 3% iyo 10%, iyadoo kuxiran jimicsi kasta. Iyadoo la raacayo ta ay bixiso lacagaha kale ee maalgashiga.
Taakulaynta caafimaadka ayaa ah isbadal kale oo lacagahaani soo bandhigaan, iyaga oo naftooda hela iyada oo soo jeedin ahaan loo soo jeedinayo sida maalgashiga hantida shirkadaha la xiriira cudurka kansarka. Ama xitaa laxiriira daryeelka caafimaadka, daawada ama bayoolajiyada. Qeyb sanadihii la soo dhaafay muujisay isbeddel wanaagsan oo ka wanaagsan kuwa kale ee ka dabeecadda caadiga ah. Iyo halka maamuleyaal badan ay ku takhasusay diyaarinta lacagahaas. Iyada oo dalab aad u ballaaran, laakiin isla mar ahaantaana lagu kala duwan.
Maalgashiga wadamada soo koraya
Mid ka mid ah fursadaha aad uga furan qaababkan maalgashiga ayaa ah inaad awoodid ku wareeji kaydkaaga suuqyada maaliyadeed ee aan la filayn, geeska ugu dambeeya meeraha. Taasina illaa iyo hadda lama ganacsan kartid iyaga, xitaa toos uma dhex marin suuqyada saamiyada. Sidan oo kale, hadda waa suurtagal in la aado suuqyada maaliyadeed ee Vietnam, Namibia, Kenya ama Bolivia, si loo xuso in yar oo ka mid ah.
Suuqyadan soo kordhaya, si kastaba ha noqotee, waxay bixiyaan khatar aad u weyn oo aanad qaadi karin. Maaha wax aan micno lahayn, faa'iidooyinka raasumaalka ee aad heli karto aad ayey muhiim u yihiin, laakiin isla sababtaa darteed waad uga tagi kartaa euro badan hawlgal kasta. In kasta oo si loo yareeyo dhibaatadan halista ah, maareeyayaashu waxay go'aansadeen inay sameeyaan heerkan lacageed, iyaga oo la jaan qaadaya hantida kale ee maaliyadeed ee nabdoon ee bixiya xasilloonida tabarucaadka dhaqaale.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, waa suurtagal kale oo aad adigu hortaada ku haysatid, marka aad la kulanto xaalad muuqata oo bayaan ah oo suuqyadan ka jirta. In kasta oo ay jirto duruufo jira maahan inaad ku maalgeliso dhammaan keydkaaga sanduuq maalgashi oo astaamahan ah. Haddii kale, ugu badnaan, iyaga oo kaabaya kuwa kale ee aad sida joogtada ah ula shaqeyso, dakhli go'an iyo mid isbedelaya labadaba. Waxay noqon doontaa istiraatiijiyaddii si wax ku ool ah kuu ilaalin lahayd.
Xilligan, waxaad sidoo kale ku sameyn kartaa hanti ka timaadda dakhliga go'an ee waddamadaas. Taas oo si siman khatar ugu ah in la shaqaalaysiiyo. Iyada oo ay jirto isbeddel xad dhaaf ah, oo caan ka ah suuqa saamiyada, taas oo dhiiri galinaysa qadarinta iyo qiimo dhaca suuqyada aadka u xusul duuban. Si aan micno lahayn maalin keliya waad ku guuleysan kartaa (ama lumin kartaa) qiyaastii 2% raasumaalka la maal-galiyay. Dukaanleyda oo dhami ma maamuli karaan xaaladahan suuqyada.
Nooc ka mid ah maal-gashiga maal-gashiga nolosha, in kasta oo sannadihii la soo dhaafay ay dalabkoodu kordhay, xitaa iyadoo ay sii kordhayaan soo-jeedinta hal-abuurka iyo soo-jeedinta ah. Iyaga ayaa loogu talagalay maal gasho alaabta ceeriin, oo soo ururi faa'iidooyinka raasamaalka ee ka soo baxa suuqyadooda maaliyadeed. Waxay ku jiri kartaa macdanta warshadaha, sida birta iyo dhuxusha, ama inta badan soo saarista biraha qaaliga ah (dahab, qalin, platinum, palladium ...).
Hirgelinta moodooyinka maalgashiga cusub waxay xitaa gaareen qaybta beeraha, iyada oo loo marayo jagooyinka hantida maaliyadeed ee ugu weyn ee laga soo saaray meeraha. Iyo sida ay ugu hammuun qabaan hal abuurka xitaa waxay gaaraan wax soo saarka keymaha. Si kastaba ha noqotee, Kuwani waa alaab aad u takhasus sare leh oo u baahan aqoon qoto dheer oo suuqyadan ah dhankiina. Taasna kaliya iyada oo loo maro talo sax ah ayaad ku dari kartaa galkaaga soo socda ee maalgashiga.
Sidee loogu shaqeeyaa lacagahaas?
Waxaad ka heli kartaa mid kasta oo ka mid ah lacagtan maalgashiga bangiyada, in kasta oo howlaha aad fulineyso ay noqdaan kuwa rasmi ah oo taxaddar badan laga muujinayo. Waxaa jiri doona gaar ahaan ilaalinta kaydka maalgashiga, si aysan kuugu qaadin wax kadis ah oo xun oo kugu dhaca bilaha soo socda. Habka ugu aaminka badan ee xilalka looga qaadi karo maaliyaddan ayaa ah in la doorto moodello ay ku jiraan hanti dhaqameed: bonds, equities, lacagaha, iwm.
Alaabtaan waa inaan la bartilmaameedsan maxaa yeelay runti waa hal abuur, laakiin si fudud maxaa yeelay waxay leeyihiin awood korriin oo aad u saraysa, haddii ay suurtagal tahay ka sarreeya lacagaha kale.
Inta badan naqshadahan waxaa lagu sameeyaa lacago aan ahayn euro, inay u baahan doonaan sarrif lacageed si ay awood ugu yeeshaan inay is diiwaan geliyaan, iyo inay daruuri u baahan doonaan bixinta guddiyada hawlgalkan.
Way ka kacsan yihiin lacagaha dhaqameed, waana inaad u diyaar garowdaa u adkeysato xilliyada xasillooni darrada weyn, xitaa waxay kaa dhigayaan inaad lumiso lacag boosaskooda. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxay noqon kartaa bedel dhab ah marka ay suurta gasho fursadaha suuqyada caadiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Alaabada maaliyadeed » Bolsa » Lacagaha maalgashiga ugu casrisan suuqa
Ganacsiga suuqyada ka hooseeya hal euro